Rahoviana no afaka mihinana ny saka dia mieritreritra | Noti saka
Mikarakara saka iray efa kamboty na tsy lanin'ny reniny ve ianao? Raha izany dia azo antoka fa manontany tena ianao hoe rahoviana ianao no afaka manomboka manome sakafo matanjaka kokoa na latsaka, sa tsy izany? Ny famahanana tavoahangy dia fanandramana tena tsara, izay ahafahanao mamorona fatorana tena manokana miaraka amin'ny volom-borona, nefa koa mitaky be. Tokony ho fantatrao tsara izy, ary omeo hanina isaky ny 3-4 ora arakaraka ny herinandro ananany (arakaraka ny maha kely azy ireo, dia vao mainka mila misotro ronono izy.
Mahafatifaty izy ary tena malina tokoa, nefa misy fotoana tsy maintsy hifohazany kely ary farafaharatsiny mba hahaleo tena kely kely hikarakarana ny filan'ny vatany. Andao hojerentsika oviana no manomboka mihinana ny saka?.
1 Inona no tokony hohanin'ny saka vao teraka?
2 Manomboka amin'ny fanesorana ka hatramin'ny fihinanan-kenaka
2.1 Alohan'ny fanesorana
2.2 ny fisaraha-nono
3 Ahoana no fanalana kittens
3.1 Misimisy kokoa momba ny kitaran-nono
4 Rahoviana ianao no afaka mihinana hoy aho?
5 Torohevitra famahanana ho an'ny kittens
Inona no tokony hohanin'ny saka vao teraka?
Ny saka, hatrany am-bohoka ka hatramin'ny telo herinandro, dia rononon-dreny ihany no tsy maintsy fahanana. Raha tsy mety izany, satria tsy salama ny reniny na tsy salama tsara izy dia tsy maintsy omena azy ireo izay amidiny any amin'ny tobim-pahasalamana veterinera sy any amin'ny fivarotana biby fiompy indrindra ho an'ny zanak'ondry. Tsy tokony hanome ny rononon'omby ianao, satria misy lactose, izay siramamy izay matetika miteraka olana amin'ny gastrointestinal.
Raha sanatria tsy mahita ronono saka isika dia hanamboatra ity fangaro ity ho anao:
Ronono feno 250ml tsy misy lactose.
Aody atody manta (tsy misy fotsy)
Krsama mavesatra sotro iray sotro
Raha tsy afaka mahazo ronono feno isika raha tsy misy lactose dia afaka afangaro ity manaraka ity:
Ronono 150 ml.
Rano 50 ml
Yaorta voajanahary 50 ml
Yolk atody (tsy misy fotsy)
Afangaroinay tsara ny zava-drehetra mba hifangaroany tsara, hafanaintsika kely izy mba hafana (eo amin'ny 37ºC) ary omentsika an'ilay alikakely.
Manomboka amin'ny fanesorana ka hatramin'ny fihinanan-kenaka
Rehefa nosarahi-jaza ny saka dia rehefa miampita ny rononon-dreniny mankany amin'ny sakafo matanjaka izy io ary dingana lehibe ho an'ny zanak'ondry satria ampahany lehibe amin'ny fivoaran'izy ireo izany. Matetika ny renin'ankizy dia miandraikitra ny fanalana zaza, fa rehefa manana olana amin'ny famokarana ronono ny reny na rehefa tavela tsy misy reny ny fako amam-borona dia ilaina ny miditra an-tsehatra mba hanana fampandrosoana tsara ny kely. Ireto torohevitra manaraka ireto dia ireo izay tokony hotadidinao mba hahitsy ny fizotrany.
Alohan'ny hanombohana ny fizotry ny fanesorana dia zava-dehibe ny fahafahan'ny kittens miditra amin'ny rononon-dreny na colostrum izay misy antibody manan-danja amin'ny fitomboany. Raha tsy afaka mamokatra ronono ampy ny saka dia tokony hahazo ronono ny saka tsirairay, dia tsara kokoa ny mandray kely toy izay tsy mandray mihitsy. Raha manana ny reniny mastitis afaka mitady saka lactating hafa ianao afaka mamahana ny saka ianao na dia tsy anao aza izany.
Raha tsy misy reny mitaiza, dia tokony hampiasaina amin'ny tavoahangy na syringe ny raikipohy. Izy ireo dia azo fahanana mandritra ny telo na efatra herinandro amin'ny tavoahangy (on demand) miaraka amin'ny tavoahangy misy rano mafana foana ary mila manandrana ianao alohan'ny handrotsahana ny ronono amin'ny sandrinao mba hahitana fa tsy mirehitra izy io ary amin'ny maripana ahazoana aina ihany koa. raha manandrana ianao dia tsara kokoa ny manamarina fa tsy mbola narary. Raha mampiasa raofifangaro vovoka ianao dia tahirizo ao anaty vata fampangatsiahana ilay vovoka tsy miharo. Mihinana amin'ny fangatahana izy ireo na andro na alina.
Izy io dia mihoatra na latsaka mandritra ny efa-bolana eo amin'ny fiainana rehefa tapitra ny fisararana. Hanomboka hanandrana hihinana ireo sakafo izy ireo. Rehefa manomboka manaikitra sy mitsako ny tavoahangy izy ireo dia satria vonona ny hanomboka hihinana sakafo matanjaka izy ireo, na izany aza amin'ny voalohany dia tsara kokoa ho semi solid.
Ahoana no fanalana kittens
Manomboka manala zaza, afangaro ny saka an-tsokosoko miaraka amin'ny raikipohy hahafantarana ny tsiro. Arosoy amin'ny rantsan-tànanao ny fangaro ao am-bavany ary avelao izy ireo hitsoka eo. Rehefa zatra ny tsirony izy ireo dia hitady any an-kafa mba hihinana azy.
Avy eo, omeo ao anaty lovia izy ireo ary jereo tsara sao tsy mihinana haingana izy ireo ary tsy atositosika ao anaty lovia ny lohany kely, avelao izy ireo hanao izany ho azy ireo. Eo anelanelan'ny herinandro fahadimy sy ny holatra izany rehefa afaka mamindra tsikelikely amin'ny sakafo maina izy ireo. Tokony halefaka amin'ny rano aloha ny sakafo ary amin'ny herinandro fahafito sy fahavalo dia tokony efa mihinana sakafo matanjaka izy ireo.
Misimisy kokoa momba ny kitaran-nono
Rehefa misara-nono saka feno sakafo mafy ianao, dia tsy maintsy atao manokana ho an'ny zanany ny sakafo alainy. Ity karazan-tsakafo ity dia misy ny proteinina, vitamina ary izay rehetra ilaina mba hitomboany ho matanjaka sy ho salama.
Mila mafana ny kittens vao nosasana, ka zava-dehibe ny hametrahanao lamba firakotra amin'ny fatoriana ary mbola zava-dehibe kokoa aza raha tsy misy reny. Safidy tsara na paoma mafana na tavoahangy misy rano mafana ao ambanin'ny lamba firakotra na lamba famaohana. Izany dia hanome hafanana be dia be ny zanany.
Tadidio izany tsy tokony terenao ny fizotran-nono mihinana sakafo matanjaka. Dingana miandalana izy io ary ilaina ny fanajana ny gadona. Mila faharetana be fotsiny izy ireo fa be fitiavana ihany koa.
Rahoviana ianao no afaka mihinana hoy aho?
Raha vantany vao 3-4 herinandro ny saka, dia hanomboka hisintona ny tavoahangy, ny tanana ary izay zavatra rehetra eo alohany. Io no ho famantarana fa miandry ny hanombohana hanome azy karazan-tsakafo hafa isika, satria efa nanomboka nivoaka ny nifiny ronono ary, noho izany, afaka mitsako sakafo malefaka be izao ianao izao, toy ny kalon'ny saka (sakafo lena).
Satria mety tsy te hihinana samirery ianao, haka rantsana kely amin'ny rantsan-tànana isika, hanokatra ny vavany isika ary hampahafantatra azy. Avy eo, hakatonay mafy izy io nefa tsy misy hery be loatra (tsy misy maharatsy azy) mandra-piteliny. Aorian'izany, hoentintsika any amin'ny lovia miaraka amin'ny sakafo izy, ary raha ny tena izy dia mihinana irery angamba izy. Raha tsy izany dia azontsika atao ny manao azy karazana bubo misy sakafo lena mifangaro ronono ho an'ny zanak'ondry ary omena azy tavoahangy mandritra ny andro vitsivitsy.
Rehefa roa volana dia afaka manome sakafo ho an'ny zanany ianaoSaingy satria mbola tsy mafy nify izy dia tsy maintsy afangaro amin'ny ronono saka na rano.
Torohevitra famahanana ho an'ny kittens
Ka ny kely dia manana fitomboana tsara sy fivoarana tsara kokoa, Tsy maintsy omena sakafo avo lenta izy ireo, tsy misy serealy (katsaka, varimbazaha, varimbazaha, vary) na vokarinySatria tsy mila an'ireto akora ireto ny vatanao ary raha ny marina dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana isan-karazany mandritra ny fotoana fohy sy antonony ianao, toy ny allergy na aretina urinary. Ny fahasalaman'ny saka dia raharaha lehibe. Miankina betsaka amin'ny karazan-tsakafo raisiny ny fahasalamany, ankoatry ny fikarakarana azony.
Izahay, amin'ny maha-mpikarakara anao, Tokony ho mailo be momba azy isika ary hanome azy ny saina rehetra ilainy. Miankina amintsika raha hitombo ho sambatra sy salama ilay zaza, na ... ny mifanohitra amin'izay no izy. Raha tsy afaka mikarakara azy isika dia tsara kokoa ny mitady trano vaovao, raha azo atao miaraka amin'ny fanampian'ny mpiaro biby, izay ho tompon'andraikitra amin'ny fahitana azy fianakaviana afaka mandray andraikitra amin'ilay kely mandra-pahatapitry ny androny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » sakafo » Rahoviana ny saka no afaka mihinana?
Ahoana ny fomba hisafidianana sy fikojakojana sofa raha manana saka ianao